TypeSplash Apk Download ho an'ny Android [2022 Update] | APKOLL
TypeSplash Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]
Aprily 16, 2022 Janoary 22, 2022 by Reyan Ahmad
Te hahazo vola ve ianao rehefa mijanona ao an-trano? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ny fampiharana Android farany fantatra amin'ny anarana hoe TypeSplash. Izy io dia manolotra anao hahazo teboka amin'ny famadihana feo sy sary sasany ho teny ary ireo teboka ireo dia azo avadika ho vola tena izy.
Araka ny fantatrao fa noho ny toe-trangan'aretina dia orinasa maro be no nikatona. Noho izany, mizaka ny krizy ara-bola ny olona. Noho izany dia nentinay anao ity rindranasa ity, ahafahanao mahazo vola kely hamenoana ny zavatra ilainao, manolotra endrika hafa koa izy io.
Afaka mampiasa ity app ity ihany koa ny mpianatra, mba hahazoana vola am-paosy rehefa mijanona ao an-trano. Io no fomba tsara indrindra ahazoana vola nefa tsy mivoaka sy mifandray amin'olona. Noho izany, raha vonona ny hampiasa an'ity fampiharana ity ianao, dia manoro hevitra anao izahay hahafantatra momba izany, alohan'ny hampiasana ny fampiharana.
Mila mijanona kely fotsiny aminay ianao dia hizara izany rehetra izany izahay. Raha manana olana amin'ny fampiasana ity fampiharana ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay. Noho izany, aoka ho fantatsika ny momba izany.
Topimaso momba ny TypeSplash
Izy io dia fampiharana Android, izay novolavolain'ny X-Dev PH. Izy io dia manolotra rakipeo sy sary samihafa izay tsy maintsy avadika sy soratanao amin'ny teny. Raha manoratra ny teny marina ianao dia hahazo isa ary raha diso ianao dia hahazo fampandrenesana ny teny diso.
Ny feo audios dia tsy fehezanteny sarotra na lava. Matetika, ny audio dia misy teny tokana, izay tsy maintsy soratanao ao anaty boaty nomena. Raha tsy naheno ilay feo ianao dia manome anao hamerina azy imbetsaka ihany koa. Avy eo ianao dia afaka mametraka ny valinteninao.
Ianao koa dia hahazo sary misy teny vitsivitsy, fa tsy sarin-javatra na zavatra hafa. Hahazo teny samihafa ianao amin'ny sary tokana, saingy teny iray monja no hanana sisintany manodidina azy. Mila mampiditra an'io teny io ao anaty boaty fotsiny ianao ary mametraka ny valinteninao.
Ny Type Splash koa dia manome rafi-pamokarana fototra isan'andro, izay ahafahan'ny mpampiasa mahazo isa fanampiny ho an'ny fidirana fototra isan'andro. Azonao atao ny manangona ny teboka rehetra ary manova azy ireo ho vola tena izy. Haingana ny famindrana vola. Mila miala amin'ny alàlan'ny sehatra fandoavam-bola an-tserasera fotsiny ianao.
Manolotra sehatra samihafa izay mifandray amin'ity rindrambaiko ity. Hizara azy ireo eto amin'ny lisitra eto ambany izahay, saingy tokony ho fantatrareo fa ny teboka 2500 dia mitovy amin'ny 100 pesos. Noho izany, azonao atao ny misintona farafaharatsiny isa 2500 farafahakeliny.
Lisitry ny sehatra an-tserasera hanovana teboka
Misy endri-javatra mahavariana kokoa, azonao jerena amin'ny fampiasana an'ity fampiharana ity. Raha manana olana amin'ny fampidinana ity fampiharana ity ianao dia mahatsiaro ny hifandray aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Anaran'ny fonosana com.typesplash.app
Endri-javatra manan-danja amin'ny TypeSplash App
Araka ny voalazanay ny sasany amin'ireo endri-javatra ao amin'ny fizarana etsy ambony, dia mbola ho avy. Noho izany, hizara lisitr'ireo endri-javatra lehibe amin'ity fampiharana ity miaraka aminareo rehetra izahay. Azonao atao koa ny mizara ny traikefanao aminay.
Mamadika haingana ny teboka ho lasa vola
Rafitra fifanakalozana haingana
Isa Bonus fanampiny ho an'ny fidirana
Misy ny doka
Ahoana ny fomba fampidinana TypeSplash Apk?
Hita ao amin'ny Google Play Store izy io, fa raha te-hisintona azy amin'ity pejy ity ianao dia mizara rohy azo antoka ihany koa izahay. Mila mitady ny bokotra fampidinana eto amin'ity pejy ity fotsiny ianao. Tsindrio eo ary miandry segondra vitsy dia hanomboka ho azy ny fampidinana.
TypeSplash no fampiharana tsara indrindra hahazoana vola nefa tsy miala amin'ny efitranonao. Noho izany, ampidino fotsiny ity rindrambaiko ity ary manomboka mahazo vola ary zahao zavatra mahatalanjona kokoa. Mitsidika hatrany ny Website ho an'ny fampiharana bebe kokoa.
Sokajy Apps, famokarana Tags TypeSplash, TypeSplash Apk, App TypeSplash Post Fikarohana
Baldia Online Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]
Yoya Busy Life World Apk Download Ho an'ny Android [Doll World]